Loaka A ** ve aho? | Martech Zone
Loaka A ** ve aho?
Alakamisy 20, 2008 Zoma, Aprily 23, 2021 Douglas Karr
Izaho dia lavaka ** **?
Ireo mpamaky ny bilaogiko dia mijanona ho ahy ary miresaka ny fanajana, ny fitiavana ary ny fangorahana izay ezahako omena amin'ny alàlan'ny bilaogiko. Persona iray tokoa no kasaiko harahina ary iray izay ezahako miasa mba hahatonga azy io ho lafatra isan'andro. Ny tombotsoan'ny bilaogy dia manana tombony amin'ny fanomanana mialoha (na dia taloha aza dia izaho no izy blunt tsara tarehy), fa ny tena fiainana dia tsy mandeha amin'izay.
Matetika aho no nanana faniriana fatratra hahazo vaovao. Tezitra amin'ny tenako aho rehefa misy olon-kafa mitondra teknolojia vaovao izay tsy haiko akory. Aorian'ny andro iray any am-piasana dia milevina amin'ny Internet aho mikaroka zavatra sy zavatra rehetra eto ambonin'ny planeta. aho te hahalala azy rehetra. I te hanan-kevitra amin'ny zavatra rehetra (ary matetika no ataoko).
Miaraka amin'ireo mpiara-miasa amiko anefa dia miasa mafy aho hahafantatra hoe aiza no manomboka sy mamarana ny fetra andraikitro. Raha mitarika ny sasany amin'ireo paikady manan-danja indrindra amin'ny orinasanay izahay dia tsy afaka ny ho ao anatin'ny fivoriana rehetra ary manipy ny vola 2 cents amin'ny resaka rehetra. Nanakarama mpiasa mahay sy mahay momba ny asa-tànany kokoa noho ny taloha aho. Na dia mafana fo aza aho dia mila manala ny tenako ary mifantoka amin'ireo faritra azoko atao ary tsy maintsy misy vokany.
Tamin'ity herinandro ity dia niasa tany aho Ny lalàna tsy misy fady: manangana toeram-piasana sivily sy miaina izay tsy izy by Robert Sutton. Tsy hatramin'ny namakiana Bibilava miakanjo: rehefa miasa ny psychopaths, efa voadona tamin'ny boky momba ny fitondran-tena sy ny psikolojia any am-piasana aho.
Nandritra ny taona maro dia nihevitra aho (tsy nisy nanome ahy) ny adin-tsaina noho ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny fikambanana. Nijery aho fa maro ny mpiara-miasa amiko nohanin'ny velona tamin'ny fihenan'ny asa ary izaho koa dia niaritra fihemorana mahatsiravina ihany koa.
Angamba aho mandehandeha miaraka amin'ny tantara an-tsarimihetsika momba ny toeram-piasana mandritra ny roapolo taona ao aoriako, saingy ny tena izy dia liana amin'ny asa ataoko ankehitriny toy ny folo taona lasa. Tsy miala tsiny amin'ny fitiavako aho, ary tsy manafina izany mihitsy. Na izany aza, nanjary nanjary niraikitra am-pihetseham-po aho tamin'ny olana sy andraikitra hiantefan'ny mpiara-miasa ny famaritana sy ny fanatanterahana izany.
Ny vokany dia fahombiazana! Mihoatra ny tanjon'ny ampahefa-potoana faha-4 aho izao, ary misy fiatraikany lehibe amin'ny orinasako ary tsy jerena (tanteraka) ho lavaka ** tahaka ny efa nataoko taloha. Matoky ny olona aho fa handray fanapahan-kevitra manodidina ahy, na dia tsy ekeko aza izany. Tsy nataoko tandindomin-doza mihitsy ny orinasa na ny mpanjifa, fa tiako ihany koa ny tsy tokony hijerenan'ny olona ny sorony na hanahy ny amin'izay mety ho hevitro.
Amin'ny alàlan'ny fihatahana am-pientanam-po amin'ireo fanapahan-kevitra izay tsy ahy dia manome fotoana bebe kokoa ahy hanatsara ny sehatry ny andraikitra izay ataoko izany am mifehy. Ity misy torohevitra omeko anao mba hahombiazanao bebe kokoa amin'ny asa rahampitso:
Atsaharo ny fanahianao momba ny asa izay andraikitry ny hafa.
Atolory ny hevitrao rehefa anontaniana ianao, raha tsy izany dia tazomy ho anao (raha tsy mametraka ny orinasa na ny mpanjifa amin'ny loza).
Ianaro ny fomba hialana amin'ny fihetseham-po amin'ireo fanapahan-kevitra sy fomba tsy anananao.
Mifantoha amin'ny asa ataonao afaka manaova fiovana amin'ny.
Ho sambatra kokoa ianao, handroso haingana ny mpampiasa anao, ary tsy hataon'ny olona hoe lavaka ** ianao.
Omeo baiko ny lalàna tsy misy fandroana ao amin'ny Amazon
Tags: Dondrom-belonaboky marketingtsy misy lalàna mifehyRobert sutton
StumbleUpon dia manohy mamahana ny bilaogiko
Mizarà ny slide-nao amin'ny Slouriare, Facebook ary LinkedIn
20 Nov 2008 tamin'ny 11:40 PM
Tsy tsapako fa ho lasa bilaogy iray manontolo ity. Manantena zavatra toa ny vata fandatsaham-bato aho ary manara-maso fotsiny ny bokotra eny na tsia faingana ary mandroso.
Maneso fotsiny tompoko. Lahatsoratra tsara Tena sarotra ho ahy ny mamela ny zavatra sasany, saingy toa anao dia mieritreritra aho fa mianatra manao an'izany bebe kokoa isan'andro.
Mety mila mindrana an'io boky io aminao aho, saingy izany no ho ny boky faha-4 izay eo ampovoan'ny famakiako.
20 Nov 2008 tamin'ny 11:46 PM
Ka inona no ho valim-pifidiananao? 😉
21 Nov 2008 amin'ny 7:38 maraina
Lahatsoratra tsara Tena ara-potoana indrindra io satria ny fampahatsiahivana tsara fa tsy ny iray dia tsy mifehy ny zava-drehetra, na inona na inona haben'ny orinasa ary na lehibe toy inona aza ny ego.
21 Nov 2008 amin'ny 8:03 maraina
Manantena fotsiny aho fa tsy mieritreritra ahy ho lavaka ** ** hihinanana cupcake farany amin'ny Amboara Bean! Kidding, izaho sy ianao dia samy mahalala fa mbola misy am-polony mbola maro aorian'ny nialako 🙂
21 Nov 2008 amin'ny 9:40 maraina
Tsy te-hiteny aminao izahay, fa. . . 🙂
Azoko ampiana ity lahatsoratra ho avy ity Fetiben'ny bilaogy famerenana boky?
21 Nov 2008 tamin'ny 1:43 PM
Salama Clark, azonao atao ny manampy azy io. Misaotra nanontany.
21 Nov 2008 tamin'ny 12:49 PM
Nahamarika izany aho tato ho ato any am-piasana. Ny mpiara-miasa manjary mifangaro be amin'ny zavatra hitany fa fanapahan-kevitra diso ka tsy voafehiny amin'ny farany. Midika amin'ny toetra ratsy, fiteny ratsy amin'ny vatana, fahamaizana ary tokony hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny asany izany. Mbola ratsy kokoa aza, azoko antoka fa misy mahamarika ny fitantanana.